Praiminisitra Ntsay Christian: “Mitaky fitantanana lavitry ny kolikoly isika” | NewsMada
Praiminisitra Ntsay Christian: “Mitaky fitantanana lavitry ny kolikoly isika”
Par Taratra sur 20/06/2020
Hentitra ny Praiminisitra Ntsay Christian tany Analanjirofo, omaly, nanoloana ireo tompon’andraikitra any an-toerana sy ho an’ny rehetra koa. “Tokony hanana toetsaina manalavitra ny kolikoly ary mifototra amin’ny fahamarinana amin’ny fanatanterahana ny adidy sy andraikitra nankinina aminy ireo tompon’adraiki-panjakana tsirairay, hitondra vahaolana amin’ny fiadidiany izy ireo fa tsy ho fototry ny olana”, hoy izy. Nanteriny fa ho zava-poana ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana raha tsy miainga amin’ny fandraisana andraikitry ny tsirairay. Fototra ahafahantsika mampandroso ny firenena sy manova ny tantara, araka ny nambarany.
Momba ny fampandrosoana ankapobeny, nambaran’ny praiminisitra fa hotendrena tsy ho ela ny governoran’ny faritra Analanjirofo. Niaiky anefa ny tenany fa sarotra ny mitady olona mifanaraka amin’ny marimaritra iraisana. “Tokony hanaiky ny ho voatendry eo ny rehetra ary tokony hikatsaka ny mahasoa ny vahoaka sy ny fampandrosoana ny faritra ilay olona tendrena”, hoy ihany izy. Mila rindran-damina ny fanatanterahana ny asa kasain’ny fitondrana hapetraka eny anivon’ny faritra, araka ny nanteriny hatrany.
Tambavy CVO 50 000 fatra
Ankoatra izany, nitaky ezaka amin’ny tompon’andraikitra manoloana ny fifindran’ny valanaretina ny lehiben’ny governemanta. Anisan’izany ny fanentanana ny mponina hanaja ny fepetra iarahana amin’ny tompon’andraikitra sy ireo mpitandro filaminana. “Tokony hanara-maso ny fivezivezen’ny olona na an-tanety na an-dranomasina”, hoy izy.
Tsiahivina fa nitondra fanampiana tany an-toerana ny praiminisitra. Anisan’izany ny tambavy CVO mifatra 50 000, arovava miisa 150 000, savony sy fitaovana fanasana tanana maro, natokana ho an’ireo toerana ifamezivezen’ny olona (sekoly, hopitaly, biraom-panjakana,…).Hataon’ny fanjakana ho laharam-pahamehana koa ny fampitaovana ny hopitaly, na amin’ny EPI izany na ny fanafody ary nomena fanampiana manokana ny eny anivon’ireo sakana ara-pahasalamana “barrages sanitaires” ho fanamorana ny asan’izy ireo.